चार छोराछोरीलाइ लिएर खो’लामा हा’म फा’लिन आमा, सबैको मृ’त्यु – Paluwa Khabar
सोमबार , कार्तिक १, २०७८
चार छोराछोरीलाइ लिएर खो’लामा हा’म फा’लिन आमा, सबैको मृ’त्यु
कार्तिक १२, २०७७ बुधबार 25
काठमाण्डौं । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–५ बस्ने धर्म नेपालीलाई श्रीमतिसहित चार छोराछोरीलाई खो’लामा डु बे र दे’ह त्याग गर्न बा’ध्य पारेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यलय बाजुराले मु’द्धा चलाएको छ । उनका कारण श्रीमती सत्ता नेपालीसहित चार बालबालिकाले कवाडी खोलामा हा’म फा’लेको हुनसक्ने प्रहरी अनुसन्धानले बताएको छ ।
सोही कारण धर्म नेपालीविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिन लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र ठगुन्नाले जानकारी दिए । असोज १६ गते उनकी श्रीमती सत्ता नेपालीले चार छोराछोरीसहित कवाडी खोलामा हा’म फा’लेका थिए । न’दिमा नुहाउन गएको भएपनि सँगै ५ जना बे’प’त्ता नहुनुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रकाश सिंहले बाजुराबाट दिनेश खबरका लागि पठाएको समाचार अनुसार, धर्मले सधै श्रीमतीलाई कु ट पि ट गर्ने तथा वि’भिन्न मा’न सि क त ना व दिने भएकाले सत्ताले न’दिमा बच्चासहित हा’म फा’लेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेकोले धर्मलाई मु द्धा चलाएको प्रहरीले छ ।
स’त्ता नेपाली सासु ससुराबाट अलग बस्दै आएकी थिइन् । स्थानीयका अनुसार दुवै पतीपत्नीबिच दैनिकजसो झै’झ ग डा भइरहन्थ्यो । धर्म सधैजसो म दि रा से व न गरिरहने भएकाले झ ग डा हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।
हालसम्म न’दिमा बे’प’त्ता भएका ५ जना मध्ये २ जनाको श’व फेला परेको छ। ३० वर्षीया सत्ता नेपाली र उनकी ४ वर्षकी छोरी सन्तोषी नेपालीको श’व फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। दुवै जनाको श’व कर्णाली नदिमा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र ठगुन्नाले बताए । सांकेतिक तस्वीर
Prevदशैका कारण घट्याे परिक्षण काठमाणडाैमा मात्र २० हजार संक्रमित
Nextबैज्ञानिकले पत्ता लगाए काेराेना नष्ट गर्ने सजिलाे उपाय
ओलीले पहिलो नम्बरमा मलाई जेलमा कोच्दैछन् : माधव नेपाल
एक्कासी के भयो देउवालाई? आँखाभरि आँसु लिएर रूँदै यस्तो भने, सांसद भवनमा मच्चियो हं’ गामा
विश्वविद्यालयले रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्ने मिति सार्वजनिक
लाैह पुरूष गणेशमानकाे १०६ ओैंं जन्म जयन्ति बिबिध कार्यक्रम सहित मानाईदै
एक्कासी फेरी लकडाउन हुने मिती तोकियो, यति गतेबाट पुन देशमा लकडाउन सुरू हुँदै (521)
शिक्षकले राजनीति गरे जागिरै चट् पार्ने गरि यस्तो बन्यो कानून , पढ्नुहोस कानुन? (341)
मास्टर माइन्ड प्रचण्डलाई देउवाले दिए सरकारको सबै जिम्मा, माओवादीबाट नयाँ राष्ट्रपति को ? (328)
आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, कस्को कति तलब वृद्धि ? (328)
माओवादी केन्द्रमा भुइँचालो , सोह्र सांसद एमालेमा प्रवेश ! नामावली सहित (325)
भर्खरै बिमान दु’ र्घटना हुँदा प्रधानमन्त्री सहित ११ जनाको मु’ त्यु , मनमा माया भए RIP लेख्नुहोला (315)
अब बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ता, यसरी प्राप्त गर्नुहोस्? (273)
पर्यटनमन्त्रीमा प्रेम आले (267)
बो’क्सी भन्दै यसरि गरे भाउजूको ह’त्या हेर्नुहोस्)
यस्तो छ तपाईको सोमबारको भाग्य महादेवको दर्शन गरि कार्तिक १ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
कम्पनीले नक्क’ली टिकट दिएर विमानस्थलमा अलपत्र नेपालीको एनआरएनएद्वारा उद्दार गरि स्वदेश फिर्ता।
ट्राफिक प्रहरीलाई घु’स दिन खोज्ने चालक प’क्राउ
पोखरामा घर भइ अष्ट्रेलियामा रहेका सन्जोग गुरुङ्गको नि’धन
१.	खसी काट्ने बिबादमा बुवाले आफ्नै छोराको घाँटी का’टे (62)
२.	आधा घण्टा अघि यस्तो तस्बिर राखेकी डा. दीपाको भयो दु’खद् नि’धन (भिडियो हेर्नुस्) (55)
३.	नेपालगञ्‍जबाट मुगु जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा २२ को मृ’त्यु (53)
४.	सांसदको दसैँ भत्ता काटिएपछि रामनारायण बिडारीको आक्रोश : के सबै सांसद विनोद चौधरी हुन् ? (51)
५.	हार्दिक श्रदान्जलि ट्याक्टर दु’र्घटना,एमाले जिल्ला अध्यक्षका छोराको मृ’त्यु (48)
६.	दसैंको मुखमा श्रीमान मा र्ने श्रीमती सहित ४ जना हि रासतमा अरु को को रहेछन् ह त्यारा (भिडियो हेर्नुस्) (46)
७.	राजा ज्ञानेन्द्रलाई भट्टराईको धम्की : देशको आलिकती माया भए चुप लागेर गणतन्त्र स्वीकार्नु ( सहि वा गलत ) (43)
८.	भारतिय कोच भन्छन् : ‘साफ च्याम्पियनसिप नेपालले नै जित्छ’ (42)